Jubaland oo faah-faahin ka bixisay shuruuda ay ku xirtay wada-hadallada Farmaajo - Caasimada Online
Home Warar Jubaland oo faah-faahin ka bixisay shuruuda ay ku xirtay wada-hadallada Farmaajo
Jubaland oo faah-faahin ka bixisay shuruuda ay ku xirtay wada-hadallada Farmaajo
Muqdisho (Caasimada Online) – Agaasimaha warfaafinta maamulka Jubbaland Maxamed Axmed Sebriye Bassaam ayaa soo saaray qoraal uu ku sharaxayo caqabadaha ku hor gudban shirkii Muqdisho uga furmi lahaa madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland iyo Madaxweyne Farmaajo.
Agaasimaha ayaa qoraalkiisa ku sheegay in uusan sax aheyn su’aasha ay dad badani qabaan ee ah “Doorashaaba laga garramayee Gedo maxaa keenay?”
Waxa uu sheegay in Jubbaland ay ka koobantahay seddax gobol, kuwaas oo ka talinta masiirkooda ay dusha ka saarantahay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe.
Sidoo kale waxa uu sheegay intii loo fadhiyey shirkii Dhuusamareeb-2 inay madaxda dowladda federaalka iyo Jubbaland ku heshiiyeen inta aan la gaarin waqtiga Dhuusamareeb-3 in xal laga gaaro arrinta gobolka Gedo, “ciidamada dowladda federaalkana laga saaro, si looga heshiiyo nooca doorasho ee dalka ka dhici karta.”
“Heshiiskaas waxa uu ka fuli waayey dhanka dowladda federaalka oo aan wax tallaabo ah qaadin, iyadoo taas bedelkeedana maalin kasta carqalad iyo amni darro gobolka kasii wada” ayuu qoraalkiisa ku sii daray.
Waxa uu sheegay in madaxweyne Axmed Madoobe uusan miiska u fadhin Jubaland Gedo ka maqantahay, ee uu u fadhiyo Jubbaland guud.
Madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland oo habeenkii seddaxaad Muqdisho ku hoyanaya ayaa weli diidan in uu furmo shirkii ay la yeelan lahaayeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo, iyagoo soo bandhigay dhowr shuruudood oo ay furitaanka shirka ku xireen.
Xubnaha beesha caalamka oo markii horaba ka shaqeeyey imaanshaha Muqdisho ee madaxweynayaashan ayaa ku dadaalaya sidii ay madaxdan ay ugu qanci lahaayeen inuu furmo shirka ay la yeelanayaan madaxweynaha, si loo jaan gooyo nooca doorasho ee dalka ka dhaceysa dabayaaqada sanadkan.
𝗗𝗢𝗢𝗥𝗔𝗦𝗛𝗔𝗔 𝗟𝗔𝗚𝗔 𝗚𝗔𝗥𝗥𝗔𝗠𝗔𝗬𝗔𝗬𝗘 𝗚𝗘𝗗𝗢 𝗠𝗔𝗫𝗔𝗔 𝗞𝗘𝗘𝗡𝗔𝗬?
𝗝𝗨𝗕𝗕𝗔𝗟𝗔𝗡𝗗 waxay ka koobantahay saddex gobol oo kala ah 𝗚𝗘𝗗𝗢, Jubbada dhexe iyo Jubbada hoose, waxaana madaxweyne ka ah 𝗔𝗫𝗠𝗘𝗗 𝗠𝗔𝗫𝗔𝗠𝗘𝗗 𝗜𝗦𝗟𝗔𝗔𝗠 asaga ayaana miis kasta oo masiirkeeda lagaga arrinsanayo u fadhiya, asaga oo ka wakiil ah guud ahaan dadka iyo deegaanada 𝗝𝗨𝗕𝗕𝗔𝗟𝗔𝗡𝗗.
Su’aasha ah maxaa waqtigan gobolka 𝗚𝗘𝗗𝗢 miiska loo soo saarey? waxay daba socotaa heshiiskii Dhuusamareeb2 ee gogol xaarka u ahaa in Doorasho loo dhanyahay dalka ka qabsoonto.
Shirkii Dhuusamareeb2 waxay Madadxda DFS iyo 𝗝𝗨𝗕𝗕𝗔𝗟𝗔𝗡𝗗 ku heshiiyeen inta aan shirka Dhuusamareeb3 la isugu imaanin in xal rasmi ah laga gaaro arrinta gobolka 𝗚𝗘𝗗𝗢, ciidamadana laga saaro si looga heshiiyo nooca doorasho ee dalka kadhici karta.
Heshiiskaasi wuxuu ka fuli waayey xaga DFS oo aan wax tallaabo ah qaadin, taas badalkeedana maalinkasta carqalad iyo ami darro gobolka kasii wadda.
Sidaa darteed Madaxweynaha 𝗝𝗨𝗕𝗕𝗔𝗟𝗔𝗡𝗗 miiska wada hadalka kuma fadhiyo Jubbaland 𝗚𝗘𝗗𝗢 ka maqantahaye wuxuu ku fadhiyaa Jubbalandta guud, heshiiska Doorasho ee uu la gali karo DFS wuxuu imaan karaa kadib marka gobolka 𝗚𝗘𝗗𝗢 gacanta 𝗝𝗨𝗕𝗕𝗔𝗟𝗔𝗡𝗗 lagu soo celiyo isla markaasna nooca farsamo, amni iyo goobaha Doorashadu ka dhici karto gobolkaasna 𝗝𝗨𝗕𝗕𝗔𝗟𝗔𝗡𝗗 masuuliyadeeda yeelato.
Magacana wado maamulkana daa meel ma wada gashee meel isugu bayra/baydha.
𝗠𝗼𝗵𝗮𝗺𝗲𝗱 𝗔𝗵𝗺𝗲𝗱 𝗦𝗮𝗯𝗿𝗶𝘆𝗲